Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Gastronomika maharitra ao amin'ny Nosy Seychelles
Vaovao Mafana • culinary • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • tompon'andraikitra • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Eo amin'ny lakozia Seychellois mahazatra, ny gastr gastric maharitra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny vondrom-piarahamonina kreôly tsy any Seychelles ihany fa eo amin'ireo denizen-nosy nosy manerantany.
Seychellois dia mahafantatra tsara hoe avy aiza ireo akora ireo, ny fomba fitomboan'ny sakafo ary ny fomba ahatongavany amin'ny tsena ary amin'ny latabatra.
Ny mponin'ny nosy dia mividy sakafo arakaraka ny vanim-potoana ary manamboatra ny menus arakaraka izay misy.
Ny fividianana akora vaovao avy amin'ireo tantsaha eo an-toerana dia manampy amin'ny famelomana ny toeram-pambolena ka hatrany amin'ny rojom-pamokarana.
Voakasiky ny lova maro samihafa izy io, ny nahandro kôlôla dia feno tsiro marobe ary ny Seychellois dia mahatsapa tsara hoe avy aiza ireo akora, ny fomba fitomboan'ny sakafo ary ny fomba ahatongavany amin'ny tsena ary amin'ny farany ambony latabatra. Ny gastronomy maharitra dia mamela antsika hisafidy ny sakafo izay mahasalama ny tontolo iainana sy ny vatantsika ary ny vaovao tsara dia na aiza na aiza misy anao eto an-tany dia mety hahazo tombony amin'izany koa ianao.
Ireto misy fomba fanao maharitra azo raisina amin'ny sakafon-tsolika:
Tohizo ara-potoana - Ny mpianakavy Seychellois dia mailo hatrany amin'ny fividianana sakafo ara-potoana izay mitarika amin'ny sakafo maharitra; izany dia mitaky fihinanana sakafo sasany na dia be aza izy ireo, mandray soa amin'ny famokarana voajanahary ny tontolo iainana ary koa amin'ny kitapom-bolanao.
Mahaiza mandanjalanja - Vonona ny hanitsy ny menio arakaraka izay misy. Ny lovia kreôla dia manana fomba hafa isafidianana ny fisian'ny akora; manakana ny fanelingelenana amin'ny famokarana voajanahary izany.
Ny eo an-toerana no tsara indrindra - Makà akora vaovao avy amin'ny toeram-piompiana sy mpamokatra eo an-toerana ary fantaro bebe kokoa ny zavatra apetrakao ao amin'ny vatanao. Ao amin'ny bitika Vondrom-piarahamonina Seychelles, ny mponin'ny nosy dia manangana fifandraisana amin'ny mpamatsy azy eo an-toerana, izay ahafahan'izy ireo manontany momba ireo vokatra ary mahazo mihitsy aza ny torohevitra momba ny fomba hitrandrahana betsaka indrindra amin'izy ireo.
Misafidiana hazan-dranomasina maharitra - Amin'ny fanatonana akaiky kokoa ny mpamatsy anao dia manana hevitra tsara kokoa ianao raha nampiasa fomba fanjonoana maharitra izy ireo na tsia. Amin'ny maha firenena nosy kely azy, ny ankamaroan'ny mpanjono ao amin'ny Nosy Seychelles dia mampiasa fomba fanjonoana maharitra ary manalavitra ny jono faobe ary ny ankamaroan'ny mponina dia manana mpamatsy ara-dalàna manao izay hahamora ny fanaovana safidy maharitra.
Tandremo ny safidinao amin'ny trondro sy hazan-dranomasina - Na dia safidy mahasalama aza dia misy karazan-trondro sasany fanjonoana be loatra ary mihena ny isany. Alohan'ny hividianana hazan-dranomasina dia ampianaro ny famokarany sy ny fangatahan'izy ireo eny an-tsena. Ny karazana sasany toy ny losters dia iharan'ny vanim-potoana mihidy mba ahafahan'ny tahiry miverina mamorona. Ny manampahefana Seychelles Fishing Authority dia mampahalala ny besinimaro amin'ny antsipiriany momba izany, miantoka fa ny Seychellois dia tsy miteraka fahasimbana eo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina marefo.
Vidio ihany ny zavatra ilainao - Rehefa mety dia manaova fitsangatsanganana matetika any an-tsena, mahazoa ny filanao isan'andro na isan-kerinandro fa tsy mividy be loatra ary tsy mila manary sakafo. Miaraka amin'ny tsena eo an-toerana sy ny akora vaovao misy manerana ny nosy, dia nanjary fanao mahazatra ao amin'ny fiarahamonina Seychellois ny mipoitra amin'ny tsena akaiky indrindra isaky ny ilaina, manamora ny fampihenana ny fako. Mora ny mahafantatra rehefa apetraka amin'ny mpanjono ny hazandrano azony ary tratran'ny trondro vaovao eny an-tsena ny feon'ny 'lansiv' dia hiako manerana ny distrika.
Ahena ny fako - Na eo aza ny natiora, ny sakafo dia mila fotoana elaela vao simba, matetika miangona ao anaty fanariam-pako, noho izany ilaina ny mampihena ny fako. Ny fandaminana ny sakafo, ny fampihenana ny fandaniam-bola be loatra ary ny fampiasana fako feno dia mety hisorohana ny fako ara-tsakafo tsy ilaina ary koa hampihena ny fandaniana fanampiny.
Ampiasao feno ny fangaroanao - Anisan'ny mampihena ny fako ara-tsakafo ny fampiasana ny vokatrao betsaka araka izay tratra. Araka ny fomban-drazana, Seychellois dia tsy nanan-karena tamin'ny fanariana sakafo; noho izany dia nampiasain'izy ireo tamin'ny fomba feno izay azony natao, ka nasiany zava-manitra mba hamoronana lovia matsiro.
Ho any amin'ny compost - Izay zavatra rehetra tsy azo ampiasaina dia azo raisina ho compost foana. Amin'ny ankabeazan'ny tokantrano Seychellois dia afaka mahita kitapo zezika ianao, izay azo ampiasaina ao an-jaridaina, feno fako avy amin'ny voankazo, legioma, vokatra vita amin'ny ronono, vary, tsaramaso, atody, vokatra avy amin'ny varimbazaha, akora zavamaniry sy voninkazo, dite ary vokatra kafe. Anontanio ny mpitantana ny tranonao hoe aiza ny antontam-bokin'ny zezika sy ny fomba fanariana fako.
Hatsaram-po an-trano - Afaka manana akora vaovao ao an-trano ianao, mipetraha eo akaikin'ny tsenanao eo an-toerana hividianana kojakoja ilaina ary afaka manana zaridaina kelinao ianao hahafahanao mifehy izay ampidirina amin'ny voankazo sy legioma anao. Ny tokantrano Seychellois tsirairay dia manana zaridaina kely farafahakeliny iray na poti kely aza milahatra eo am-baravarankely miaraka amin'ny vokatra sy zava-manitra manitra azon'ny olona iray, fanao izay mbola tsy simba mandraka androany.
Plastika sy famerenana amin'ny laoniny - Aza mampiasa plastika isaky ny azo atao sy manodina. Ny zaridaina manerana ny nosy dia feno fitaovana fanodinana toy ny plastika sy kapoaka, izay lasa vilany hambolena zava-maniry, voankazo ary legioma eo an-toerana.